FAALLO, SOO KOOBAYSA HADALADII AY IS WAYDAARSADEEN HOGAAMIYHA MUCAARIDNKA EE WADANI XIRSI ALI XAJI XASAN IYO WASIIRKA GAADIIDKA IYO HORUMARINTA JIDADKA CABDILAAHI ABOKOR
Tuesday September 15, 2020 - 17:19:07 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Marka la is bar-bar dhigo labadaii qudbadood ee hogaamiye Xirsi xali xaaji xasan iyo wasiir cabdilahi abokor waxaa kuu soo baxaya waxyaabahan.
1. Ugu horayn mucaardanimada macnaheedu waa wax sixid iyo toosin khaladka xukuumadu gasho,xarsi waxa uu si qodabaysan utaabtay waxyaabaha ay ku fashilantay xukuumadu isaga oo mid mid I su dultaagay,madaxwaynuhuna waa la qiray oo wuxuu ka sheegay goobta in
mucaardnimada loo baahnayahy,waa iga su,aale hadaanu madaxwaynuhu kawar la ayn xaalada wadada ceeri-gaabo muu isla masharaxaa ku beeniyo warkaas Hogaamiyaha,maxaa keenay hadalka dambe ee wasiirka !!!
2. Xirsi waxa uu sidioo kale madaxwaynaha usheegay in wakhti badan ka tegay welina aan wax muuqda laga hayn taasina waa wax dhamaan somaliland bari ilaa galbeed ay is waydiinayaan,hogaamiyihuna waxa uu hoga tusaaleeyay sida ay uga go,antahay inay daba
taagnaadan mudo xileedka madaxwaynaha ,maadama ay rabaan inay xukunka si sharciya ugala wareegaan waa haday shacabku cimaamadaane .
3. Hogaamiye xirsi waxa uu sidoo kale goobta ka sheegay sida heerka wax barasho ee dalku u
hoos ugu dhacday tayo iyo tiro ba intuu xukunka joogay madaxweynuhu. Ugu dambayn hogaamihihu waxa uu doodiisa iyo hadalkiisa udhiibtay si maamus iyo milgoba leh iyadoo aanay ku rin wax naxliya iyo caadifadi midna .
Dhanka wasiirka hadaynu eegno waxaa iyana kuu soo baxaya waxyaabahan.
1.Ugu horayn wasiirku waxa uu ahaa mid caadi Fadaysan ,Xamaasadaysan sidoo kalena u arkayay in guri uu lahaa laga qaaday, wasiirku waxa uu ilowsanaa in la dhaliili karo daahana laga qaadi karo waxyaabaha uu ku fashilmay wasiirku waxa uu ilaabay inuuu yahay wasiirka
dhamaan bulsho waynta Somaliland (mucaarid iyo muxaafid iyo shacaba).
2.Wasiirku waxauu is kulul u dhaliilay Hogaamiyha isagoo mucaarida oo aan manta xil hayn waxa uu ku eedaynayay musuq lkn cadayn muu hayn oo waxay ahyd qiyaas iyo wax malo
awaala. Wasiirku waxa uu ahaa shalay qofka soo eedaynayay xiris ee dacwada ku qaadayay sidoo kalena
waxa uu ahaa xaakinka xukumay oo waxa uu yidhi (Tuugnimo ayuu kula dhex jiray wadada mudadii uu gacanta ku ahay) isagaa markhaati isu ahaa oo inuu wax xaday isugu markhaati
3.Wasiirku waxa aad moodaysay inaanu fahansanayn awoodaha isu dheeli tiran ee qaran ee mid walba shaqadeeda leedahy inay jiraan waxa uu balan ku qaaday inay shan sano oo mudo kordhina samaysan doonaan lkn tlow halkay u marayaan hadii caado qaatayashan baarlamaanka Ku sheega ahi ina dhaafan oo doorasho dhacdo.
4.Wasiirku wax uu meel kaga dhacay komishanka cusb ee kalsoonida ay wad siiyeen mucaarid iyo muxaafidba maadaama ay u muuqatay inuu ka soo qaaday xafiis hoos taga madaxtooyada.
Gun iyo gunaanadkii marka aad is bar-bardhigto labada aa masuul waxa kuu soo baxaysa sida loo kala bisaylsanyahy loona kala siyaasi yahanyahy iyo weliba sida loo kala hadal cadyahay Somaalidu waxay ku maah maahdaa (hadalna lakal odhan og, allena lakala baryi og.)
W/Q: Abdirizak barud Hassan
………………………………………..allaa mahad leh……………………………….